Tsipy kanetibe – «Tournoi international» : hahazo fiarakodia ny ekipa voalohany | NewsMada
Tsipy kanetibe – «Tournoi international» : hahazo fiarakodia ny ekipa voalohany
Mialoha ny handraisan’i Madagasikara ny «Mondial 2016», taranja tsipy kanetibe, hisy ny fifaninanana iraisam-pirenena, hatao ny faran’ny herinandro izao, izay natokana ho an’olon-droa ka hanomezana fiarakodia raitra ho an’izay mpandresy.
Raikitra ihany ary hotanterahina, ny asabotsy 26 sy ny alahady 27 novambra ho avy izao, etsy amin’ny kianja CBT Mahamasina, ilay “Tournoi international”, eo amin’ny taranja tsipy kanetibe. Lalao natokana ho an’olon-droa miaraka izy io ka boss sy elite na mpilalao efa kalaza no miaraka ao anaty ekipa iray. Amin’ny alalan’ny fanasana manokana ny fandraisana anjara, izay mitentina 500.000 Ar. Goavana ny loka hatolotra satria hahazo fiarakodia raitra, mitentina 18 tapitrisa Ar, ny mpandresy, miampy amboara sy medaly volamena ary tapakila roa hidirana amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, hatao ny 1 – 4 desambra ho avy izao, ao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Nomarihin’i Jafetra, anisan’ny mpikarakara, fa “tournoi” farany mialoha ny hiatrehana ny “Mondial 2016” izy ity ary efa karazan’ny andran-tsira amin’izany satria hisy mpilalao avy any ivelany handray anjara. Ankoatra ny amboara sy medaly ary tapakila roa hidirana amin’ny “Mondial”, ho an’ny faharoa, hahazo lelavola 1.500.000 Ar koa ny ekipa. Toy izany koa ny ekipa fahatelo sy fahefatra izay hahazo 500.000 Ar isan-tarika.
Hisy ekipa teknika matihanina, hanamarina tsara, ireo tena “boss” amin’ity fifaninanana ity. Ankoatra izay, hanaraka ny fepetra iraisam-pirenena ny fifaninanana, toy ny tsy maintsy hitondran’ny ekipa fanamiana mitovy manomboka eo amin’ny lalao ampahavalon-dalana, ny tsy fahafahana manao kapa na pataloa fohy na akanjo mampidera sandry. Efa afaka maka karatra fanasana ny ekipa ary misoratra anarana ao amin’ny CBT, izay hifarana ny zoma amin’ny 7 ora hariva. Ny asabotsy 26 novambra, manomboka amin’ny 9 ora maraina ny fanipazana ny bosoa.